ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - DAYU Irrigation Group Co., Ltd.
Dayu Irrigation Group တည်ထောင်သူ မစ္စတာ Wang Dong သည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။1964 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် Jiuquan မြို့၊ Suzhou ခရိုင်ရှိ သာမန်တောင်သူလယ်သမားမိသားစုတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဆင်းရဲသောမိသားစုတွင် ခက်ခက်ခဲခဲလေ့လာခဲ့ပြီး အမျိုးသားရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ကူညီရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။၁၉၈၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အလုပ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ပါတီ၏တောင်းဆိုမှုကို တက်ကြွစွာတုံ့ပြန်ပြီး အစဉ်အလာအယူအဆများကို ချိုးဖျက်ခဲ့သည်။၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် သူသည် ဒေဝါလီခံခါနီးတွင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။သူသည် Dayu Irrigation Group ကို ပြည်တွင်းရေချွေတာသော ဆည်မြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ မစ္စတာဝမ်ဒေါင်သည် 2017 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Jiuquan တွင်ရုတ်တရက်နှလုံးဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။ သူသည် 11th အမှုဆောင်အမြဲတမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ 18th National Congress ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်စက်မှုလက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအသင်းချုပ်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးမှ ပျော်ရွှင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ အထူးခွင့်ပြုငွေ။ပထမလူအဖြစ် သူအနိုင်ရခဲ့သည်။အမျိုးသား သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တိုးတက်မှု ဒုတိယဆုGansu Science and Technology Progress Award ၏ ပထမဆု၊"သော့နည်းပညာနှင့် ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တိကျသောအစက်ချရေသွယ်ခြင်းအသုံးပြုခြင်း"။သူသည် Gansu ပြည်နယ်တွင် ထိပ်တန်းအရည်အချင်းရှိသူဖြစ်သည်။အသက် 53 နှစ်၏ အရှည်သည် အကန့်အသတ်နှင့် တိုသော်လည်း မစ္စတာ Wang Dong က သူ့ဘဝ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ဘဝ၏ အမြင့်သည် နောက်ဆုံးတွင် Dayu လူမျိုးများ၏ မျိုးဆက်များ တောင်တန်းများကို သဘောကျစေမည်ဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပါတီနှင့် အစိုးရတို့သည် ဤပြောင်မြောက်သော ကွန်မြူနစ်ကို ဘယ်သောအခါမှ မမေ့ခဲ့ကြပါ။2021 ခုနှစ်တွင် Gansu ပြည်နယ် ရေအရင်းအမြစ်ဌာနမှ Mr. Wang Dong အား ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။"ရေကို ထိန်းညှိပေးသူများ" ဆု.
DAYU ဆည်မြောင်းအဖွဲ့ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် တရုတ်ရေသိပ္ပံအကယ်ဒမီ၊ ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၏ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးစင်တာ၊ တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၊ တရုတ်အင်ဂျင်နီယာအကယ်ဒမီတို့ကို မှီခိုအားထားရသော နိုင်ငံတော်အဆင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့် အခြားသော သိပ္ပံသုတေသနအဖွဲ့ အစည်းများ။၎င်းကို 2009 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Shenzhen စတော့အိတ်ချိန်း၏ တိုးတက်နေသော လုပ်ငန်းစျေးကွက်တွင် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့တာ အနှစ် 20 လောက်ကတည်းက အာရုံစိုက်ပြီး ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးလက်ဒေသနှင့် ရေအရင်းအမြစ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။စိုက်ပျိုးရေချွေတာရေး၊ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ရေပေးဝေမှု၊ မိလ္လာကုသမှု၊ အသိဉာဏ်ရှိသောရေကိစ္စ၊ ရေစနစ်ချိတ်ဆက်မှု၊ ရေဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ ကုသမှုနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ခုလုံး၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စနစ်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လည်ပတ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝန်ဆောင်မှု Solution provider သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေချွေတာရေး လုပ်ငန်း၏ နံပါတ် ၁ အဆင့်တွင်သာမက ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
Dayu Irrigation Group သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်သုတေသနဌာနနှင့် ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၏ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးစင်တာမှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် နိုင်ငံတော်အဆင့် အဓိကနည်းပညာမြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
2016 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် "R&D and Application of Key Technologies and Products for Precision Irrigation" ပရောဂျက်တွင် ပါဝင်ရန် ပြည်တွင်းသိပ္ပံသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများမှ ဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး 2016 National Science and Technology Progress Award ၏ ဒုတိယဆုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
ပထမဆုံး "Gansu ပြည်နယ်ပြည်သူ့အစိုးရအရည်အသွေးဆု" နှင့် "China Quality Award Nomination Award" တို့ကို ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သည်။အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် တာဝန်ယူခဲ့သည့် Xiaoshan ခရိုင်၏ စတုတ္ထအပိုင်း၏ ရေနုတ်မြောင်းနှင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းရေးစီမံကိန်းသည် 2016 China Water Conservancy Project Quality (Dayu) Award ကို ရရှိခဲ့သည်။"Dayu" အမှတ်တံဆိပ်ကို စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ "တရုတ်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်" အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
2019 နှင့် 2020 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမအကြိမ် တရုတ်ရေထိန်းသိမ်းရေးဖိုရမ်နှင့် ဒုတိယတရုတ်ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဖိုရမ်ကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ကျယ်ပြန့်စွာ အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး ကောင်းမွန်သော လူမှုရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ရေချွေတာသော စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆည်မြောင်း ဧရိယာများ ဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် စံနှုန်းမြင့် လယ်ယာမြေများ တည်ဆောက်ခြင်း စသည့် အောင်မြင်မှုများကို နိုင်ငံတကာ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်း လုပ်ငန်းမှ အသိအမှတ်ပြုမှု မြင့်မားခဲ့သည်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆည်မြောင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းကော်မရှင် (ICID) ၏ 68 ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကို 2017 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတကာ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းကော်မတီ၏ ပထမဆုံးသော တရုတ်စီးပွားရေးအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို ဦးဆောင်ရန် ကုမ္ပဏီအတွက် အရေးကြီးသော ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။n အမျိုးသားရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလတ်။DAYU Smart Water သည် ရေလှောင်ကန်၊ ချန်နယ်၊ ပိုက်လိုင်းစသဖြင့် Skynet control earth net ကဲ့သို့သော " earth net" ကို ဖြည့်စွက်ပေးသည့် "Skynet" ဟု အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုံးဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
7. DAYU ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
DAYU နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ ရုရှား၊ တောင်အာဖရိက၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဆူဒန်၊ အီဂျစ်၊ တူနီးရှား အပါအဝင် နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း 50 ကျော်ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ဘီနင်၊ တိုဂို၊ ဆီနီဂေါ၊ မာလီနှင့် မက္ကဆီကို၊ အီကွေဒေါ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဒေသများ၊ စုစုပေါင်းပို့ကုန်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 30 နီးပါး ရရှိနေသည်။
အထွေထွေကုန်သွယ်မှုအပြင် DAYU International သည် လယ်ယာမြေရေထိန်းသိမ်းမှု ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဆည်မြောင်း ၊ မြို့ပြရေပေးဝေရေးနှင့် အခြားသော ပြီးပြည့်စုံသော ပရောဂျက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ဗျူဟာမြောက် အသွင်အပြင်ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်။